XFCE: Etu esi hazie Linux Desktọpụ Environment? | Site na Linux
XFCE: Etu esi hazie Linux Desktọpụ Desktọpụ Linux?
Linux Post Wụnye | | Ọdịdị / Nhazi, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Otu n'ime isiokwu ma ọ bụ mpaghara, nke na-amasịkarị ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ karịa GNU / Linux gburugburu ụwa, ọ na-abụkarị ikike nke ndị ikpeazụ ikwe ka ha ahaziri onwe ha, ma nye ha ohere igosipụta nke ha customization ike n'ihu ndị ọzọ, na ike na ezi mpi.
N'ezie ọ bụla GNU / Linux Distro, nke ọ bụla Desktọpụ Environment (DE), nke ọ bụla Njikwa Window (WM) ọ na-enwekarị ike ịhazi aha dị iche iche. Ya mere, n'ime akwukwo a anyi ga-eleba anya na XFCE, nke n'agbanyeghị, bụ ọkacha mmasị m na Desktọpụ Environment (DE) ruo ọtụtụ afọ ugbu a, nke m na-eji ugbu a na Distro MX Linux 19.3.
XFCE: Kedu ihe ọ bụ na kedu ka esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19?
Otú ọ dị, maka ndị na-ejibeghị ma ọ bụ mara obere ihe XFCEỌ bara uru ịkwado ọgụgụ nke akwụkwọ anyị gara aga na ya, nke anyị kwuru na ọ bụ:
"XFCE bụ ebe desktọọpụ fechaa maka sistemụ UNIX. Ebumnuche ya bụ ịdị ngwa ma jiri obere ihe nchịkwa sistemụ, ebe ọ na-anọgide na-adọrọ mmasị ma dịkwa mfe iji. XFCE bu ihe omuma ihe omuma UNIX nke modular na reusability. Ihe mejuputara ya bu otutu oru nke n’enye oru nile ichoro ichoputa na desktọọpụ nke oge a. A na-akwakọba ha iche iche ma nwee ike ịhọrọ ya na nchịkọta ndị dịnụ iji mepụta ezigbo ọnọdụ onwe maka ọrụ". Obodo XFCE (www.xfce.org).
Maka ndị nwere mmasị ịbanye Nhazi GNU / Linux DistrosNa mkpokọta, anyị hapụrụ gị ndị a ndị ọzọ:
Etu esi hazie sistemu GNU / Linux?
GNU / Linux Desktop Days: Akwụkwọ ahụaja Weebụsaịtị iji Gbaa
Conky Manager: Jikwaa wijetị nlekota gị mfe
Compton, onye na-ede ihe dị fechaa ị ga-anwale
XFCE: Nhazi nke nke XFCE na MX Linux
1 XFCE: Linux Mouse Desktop Environment
1.1 Etu esi hazie XFCE?
1.1.3 Ntọala Njikwa Window
1.1.4 Desktop isi obubọk
1.1.5 Home Button na NchNhr
1.1.6 Ihe ndị ọzọ dị na mpụga (Conky)
XFCE: Linux Mouse Desktop Environment
Etu esi hazie XFCE?
Ka ịmalite na ịhazi ihe XFCE Desktọpụ Environment anyị ga-ekewa ya n'ime ọtụtụ ihe, na-ahapụ ndị Ntọala Desktọpụ (Akwụkwọ ahụaja), n'ihi na o doro anya na nke ahụ adịworị 100% na uto onye ọrụ.
Iji malite Nhazi XFCE, ihe kwesịrị ekwesị kwesịrị ịmalite site na ọdịdị DE, nke enwere ike ịmalite site na nhọrọ ahụ "Ọdịdị" na "Njikwa nhazi nhazi" site na XFCE. Iji mee nke a, ndị ọrụ kwesịrị ịpịgharịa na taabụ ọ bụla (Style, Oyiyi, Font na Ntọala) ma nwalee nhazi dị iche iche. Enwere m ike ihu n'ihe onyonyo a ozugbo.
Mgbe ahụ ị nwere ike ịga na nhọrọ ahụ "Oche" na "Njikwa nhazi nhazi" site na XFCE. Iji mee nke a, ndị ọrụ kwesịrị ịpịgharịa na taabụ ọ bụla (Ndabere, Menus na Ihe Oyiyi) ma nwalee nhazi dị iche iche. Enwere m ike ihu n'ihe onyonyo a ozugbo.
Ntọala Njikwa Window
Gaa na nhọrọ "Mwube Njikwa windo" na "Njikwa nhazi nhazi" site na XFCE. Iji mee nke a, ndị ọrụ kwesịrị ịpịgharịa na taabụ ọ bụla (Nhọrọ, Elekwasị anya, Nnweta, Ebe ọrụ, Ọnọdụ na onye dere ya) ma nwalee nhazi dị iche iche. Enwere m ike ihu n'ihe onyonyo a ozugbo.
Desktop isi obubọk
Site n'ebe ahụ ị nwere ike ịga na nhọrọ ahụ "Ogwe" na "Njikwa nhazi nhazi" site na XFCE. Iji mee nke a, ndị ọrụ kwesịrị ịpịgharịa na taabụ ọ bụla (Ngosipụta Ngosipụta na Ihe) ma nwalee nhazi dị iche iche. Enwere m ike ihu n'ihe onyonyo a ozugbo.
Home Button na NchNhr
N'okwu m, dịka ị pụrụ ịhụ, m na-eji ya mmewere (wijetị) akpọ «Nchịkọta nhọrọ dochie "Omenala XFCE". Nke na-enye m ohere ịhazi ya dị ka a hụrụ, na onyonyo ahụ ozugbo.
Ihe ndị ọzọ dị na mpụga (Conky)
Compton: Iji mezuo, n'etiti ọtụtụ nsonaazụ anya ndị ọzọ, nghọta zuru ụwa ọnụ nke gụnyere nghọta maka windo na-arụ ọrụ, na nghọta maka windo menu isi.
Ụmụ egwu: Iji mezuo gụnyere ngosipụta ngosipụta mara mma na arụmọrụ na desktọọpụ.
N'ezie, ọtụtụ ihe ka nwere ike ime hazie XFCEAgbanyeghị, n'oge a, mmadụ nwere ike ịgafe ọhụụ nke ndabara desktọọpụ, dị ka nke ahụ e gosiri na foto dị n’elu ozugbo, na nke ọzọ dị iche na ya, dị ka nke m gosiri gị ọtụtụ n’elu.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «¿Cómo personalizar el Entorno de Escritorio XFCE?», nke ndabara, na-abịa dị nnọọ ìhè na minimalist, ya mere, ọ bụghị nnọọ mma si visual si ele ihe anya; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » XFCE: Etu esi hazie Linux Desktọpụ Desktọpụ Linux?
GitHub kpochapụrụ youtube-dl wee mee ihe iji zere mkpọka na-enweghị isi